China Yakagadziriswa Yakadhindwa Tissue Pepa Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Quotation - MIMO KUyerera KUDZORA
Imba > Tissue bepa Tissue bepa > Yakadhindwa Tissue Pepa
kopi bepa, rudzi rwekunetseka kugadzirwa rwakanyanya kumusoro mukuru mutsika maindasitiri mapepa, iwo hwehunyanzvi hunhu hwechigadzirwa hunonyanya: iine simba rakakwira remuviri, rakaenzana kufanana uye pachena, uye yakanaka nzvimbo zvivakwa, yakanaka, inotsvedzerera, inotsvedzerera, hapana bubble jecha , Rakanaka kudhinda.Color kopi bepa chibereko chinobva pane kopi bepa,
1.chigadzirwa chigadzirwaYakadhindwa Tissue Pepa:
kopi bepa, rudzi rwekunetseka kugadzirwa rwakanyanya kumusoro mukuru mutsika maindasitiri mapepa, iwo hwehunyanzvi hunhu hwechigadzirwa hunonyanya: iine simba rakakwira remuviri, rakaenzana kufanana uye pachena, uye yakanaka nzvimbo zvivakwa, yakanaka, inotsvedzerera, inotsvedzerera, hapana bubble jecha , kudhinda kwakanaka.Ruvara kopi bepa chigadzirwa chinobva pane kopi bepa, iro rinowanzo gadzirwa nechena kopi bepa rakadhayiwa nemavara akasiyana Inogona kukamurwa kuita mhando mbiri: mukati kudhaya nekunze kudhaya.
2. Chigadzirwa parameter yeYakadhindwa Tissue Pepa:
Ruvara kopi bepa
Tora iyo OARS
Nhamba yepakeji imwe neimwe
Kuisa mbatya, shangu, waini, michero, zvinyorwa, matoyi, zvipo, mabhegi, mabhokisi ezvipo, mabasa emaoko, nezvimwe
Chero saizi inowanikwa
Nesimba rakakwirira remuviri, hunhu hwakajeka uye kujeka, uye yakanaka nzvimbo zvimiro, yakanaka, inotsvedzerera, yakatsetseka, isina jecha rebhuruu, kudhinda kwakanaka.
4. Mirayiridzo yekushandisa chigadzirwa cheYakadhindwa Tissue Pepa:
Kushandisa kopi bepa yeYakadhindwa Tissue Pepa:
1. Kuisa michero: kopi bepa ipepa rakakosha mune zvemichero zvekurongedza zvigadzirwa muNorth China. Yainyanyo shandiswa kurongedza chando peya pakutanga, saka yakawana iyo chando peya BBB1 bepa.
2. Zvipfeko, shangu, zvigadzirwa zveganda, zvigadzirwa zvehardware: mumusika wekumaodzanyemba weChina, kopi bepa rinonyanya kushandiswa kune zvipfeko, shangu, zvigadzirwa zveganda uye zvimwe zvigadzirwa kurongedza.
3. Porcelain, waini, kurongedza kwemaoko: hunyoro-chiratidzo, kufema, kudzivirira, kuumba iro basa.
4 kopi bepa kudhinda: kopi pepa ine yakanaka yekudhinda maitiro, inogona kudhindwa monochrome, kaviri-ruvara, ina-ruvara, bhizinesi Logo, trademark, inogona kuvezwa mune tsvuku, bhuruu, goridhe, sirivheri uye mamwe mavara.
5. Zvekunyora mune hunyanzvi hwechisimbiso chinyoro: nekuda kweakasarudzika chimiro chekopi bepa, inki haina kutambanuka, saka kopi bepa rinowanzo shandiswa mukusimbisa chisimbiso.
(1) Mutengo unoenderana nezvinhu, saizi, kudhinda, hunyanzvi uye huwandu;
(2) Yakanakisa kotesheni inozopihwa mushure mekugamuchira kuzere kuzere kwehomwe yako;
(3) Direct inogadzira uye yemakwikwi mutengo;
(1) Stock sampu yemahara, tsika sampuro inogamuchirwa;
(2) Muenzaniso wekuchaja unodzoserwa kana kwete, zvinoenderana neyakajairwa huwandu;
Q4: CHII CHINOTI KUTUNGAMIRA NGUVA?
Zvinoenderana nehurongwa, kazhinji tinogona kutumira mukati memazuva 7-10 ezveshoma.
Q5: UNGANGOSANGANA SEI NOKUDZIDZA KWENYAYA?
Ndokumbirawo unyoro upe ruzivo rwechigadzirwa seiyi inotevera fomati
1) saizi: L__cm * W__cm * H__cm
3) Chinyorwa: __ bepa
4) Logo: __ (color / oneside kana maviri mativi / technic / artwork)
Sydney Tissue Pepa
Ruvara tishu mapepa